Miyuu soo dhammaaday Xilli ciyaareedkii Anthony Martial?… (Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyey dhaawaca xiddiga reer France) – Gool FM
Miyuu soo dhammaaday Xilli ciyaareedkii Anthony Martial?… (Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyey dhaawaca xiddiga reer France)
Dajiye April 4, 2021
(Manchester) 04 Abriil 2021. Anthony Martial ayaa garoommada ka maqnaan kara inta ka harsan xilli ciyaareedkan kaddib markii uu ka murgacday jilibka intii uu ku guda jiray waajibaad xulkiisa qaranka France.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyey warkaan niyad-jabka leh ka hor kulanka ay caawa Man United garoonkeeda Old Trafford kula ciyaarayso Brighton & Hove Albion.
Xiddiga lambarka sagaalaad ee kooxda Man United ayaa laga saaray kulankii xulkiisa qaranka France uu la ciyaaray Kazakhstan todobaadkii hore, Macallin Ole ayaana shaaca ka qaaday inuu haatan garoomada ka maqnaan karo inta ka harsan fasal ciyaareedkan 2020/21.
“Nasiib darro, isagu jilibka ayuu kaga murgacday waajabadaadka dalkiisa France, had iyo jeer waa marka ay tagayaan ciyaaraha caalamiga ah… farahaaga ayaad kala bixin kartaa, waxaadna rajaynaysaa inay soo noqdaan iyagoo taam ah.
“Suurtogalnimada ah in aanu wayno Anthony inta ka hartay xilli ciyaareedka aad ayay niyad-jab u tahay, gaar ahaan marka warbixinnadii Faransiisku ay tilmaamayeen in aannu wax halis ahi jirin, laakiin hadda waxay u muuqataa dhaawac xun.” ayuu yiri Macallinka Man United ee Ole.
Lionel Messi iyo Frenkie de Jong oo seegi kara kulanka El Clásico ee u dhexeeya Kooxaha Barcelona & Real Madrid... (Sidee wax u jiraan?)
Man United oo garoonkeeda Old Trafford guul soo laabasho ah kaga gaartay kooxda Brighton… SAWIRRO